နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဒါဘီပွဲသည်စူပါလိဂ်တွင်လာနေသည်။ Fenerbahçeနှင့်Beşiktaşအကြားကစားရမည့်ဒါဘီနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှူရှိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ဘောလုံးပရိသတ်အားလုံးသည်ဒါဘီ၏ရလဒ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေကြသည်။
ဒါဘီ၏ရလဒ်အပြင်ဒါဘီ၏ဒိုင်လူကြီးသည်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်များစွာအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ Tugay Kaan Numanoğluသည်ဒါဘီ၏ဒိုင်လူကြီးဖြစ်ကာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်လိမ့်မည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာကစားမယ့်Beşiktaşပွဲမတိုင်မှီ၊ ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်မထားတဲ့လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာလုပ်ထားတဲ့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပွဲစဉ်၏ဒိုင်လူကြီးဖြစ်သော Tugay Kaan Numanoğluသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတအလီကိုကို၏ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ကိုင်နေသည်ဟူသောအဆိုမှာလုံးဝအတုအယောင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘောလုံးကစားရန်ပြောဆိုခြင်းမှာလည်းလုံးဝစိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်သည်။ ဤပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်သူများသည်သူတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုသက်သေပြရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဒီအရာအားလုံးအပြင်ပွဲစဉ် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက Kayserispor ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်၎င်း၏ဒိုင်လူကြီး Tugay Kaan Numanoğluတို့၏အငြင်းပွားဖွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်သည်ဤခန့်အပ်မှုအပြီးတွင်ပွဲစဉ်၏ဒိုင်လူကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမမေးခဲ့ပါ။ ငါကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရန်မရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူရကီဘောလုံးမှာပွဲစဉ်မတိုင်မီဒိုင်လူကြီးများကိုဖိနှိပ်ရန်အမျိုးမျိုးသောအမြင်စစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်နေတာကြောင့်တူရကီဘောလုံးအတွက်အသုံးမ ၀ င်တော့ဘူး၊ ။ တနင်္ဂနွေတွင်ကစားမည့်ပွဲစဉ်မှဒိုင်လူကြီးများထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်၏တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်မှာသူတို့မြင်ကွင်းများကိုခိုးယူခြင်းနှင့်ဖိအားမပေးဘဲစိတ်ဖိစီးခြင်းမရှိဘဲမျှတပြီးမျှတသောပွဲစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဘီသည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲစဉ်နှစ်သင်းစလုံး၏ကစားသမားများကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်စေလိုပြီးထိုက်တန်သောအသင်းကိုအနိုင်ရစေလိုသည်။ FENERBAHÇE SPORTS CLUB “
RESTBET501 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! SUPERTOTOBET0121 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! BETBABA100 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! SUPERBAHİS630 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! BETPAS423 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! RESTBET501 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 BEŞİKTAŞ’TAN OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI BETBABA138 BEŞİKTAŞ’TAN OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI BETPAS423 BEŞİKTAŞ’TAN OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI
12 Comments on RESTBET501 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI!
ÇAĞDAŞ December 2, 2020 at 3:10 pm
SERETAN December 3, 2020 at 1:20 pm
restbet giriş sıkıntısız bahis oynama deneyimi yaşatan hızlı bir site.
OĞRUN December 6, 2020 at 9:40 am
restbet bonus canlı poker nası oynanıyor
YASEMİN December 9, 2020 at 5:20 pm
SEVAL December 10, 2020 at 4:40 pm
ÜMRAN December 11, 2020 at 5:50 pm
restbet canlı casino türkçe restbet
KUTLUKHAN December 12, 2020 at 2:00 am
restbet canlı izle misli.kom gibi az oran veriyorlar.
DERYA December 12, 2020 at 8:00 am
restbet canlı casino restbet oranı iyi mi
LEYLA December 12, 2020 at 10:10 am
BEYZA December 12, 2020 at 4:40 pm
restbet yeni adresi yapmayın şunu ya çok reklam var giriş yapamıyorum gözüm yandı lan
PINAR December 15, 2020 at 6:00 am
restbet canlı bahis restbet sitesine üyelik
FUAT December 15, 2020 at 11:40 am